ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်းကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲ? | Mycanvas
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာ မကြာသေးမီက COVID-19 ရောဂါကြောင့် နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများခံစားခဲ့ရပြီး ၎င်းကြာင်းကျွန်ုပ်တို့အများစုတွင် ‘စိတ်ခြေကုန်လက်ပန်းကျမှုများ’ ကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းပြီးနေထိုင်ကြရတဲ့အတွက် ကြာလေလေအထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများခံစားရလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဲ့သို့ အခြားသူများကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်အာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါ ဘယ်သူမှကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနားလည်ခြင်းဟာအရေးကြီးသော်လည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းအဖြစ်သို့မရောက်သွားစေရန်သတိပြုရပါမယ်။
Tip #1 မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်မှုကိုတိုင်းတာခြင်း
– သင့်ကိုယ်သင်ပြန်မေးကြည့်ပါ :
ငါဘယ်လိုနေလဲ? အစားလွန်အအိပ်လွန်ဖြစ်နေသလား၊ အရမ်းငိုနေသလား? ဖော်ရွေတဲ့သူတွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
– ဖြစ်နိုင်ရင် နေ့တိုင်းကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြတ်သန်းပါ။ တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ဇယားဆွဲနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ – သတင်းကြည့်တဲ့အချိန်၊ စာဖတ်ချိန်တို့အပြင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်ကိုပါသင့်ရဲ့နေ့စဉ်အချိန်ဇယားထဲမှာထည့်ထားတာမျိုးတွေကလည်း ထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။
– ဂိမ်းကစားခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်းနဲ့ သင့်အတွက်စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေတဲ့အရာကို ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
– မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့သောခင်မင်ရင်းနှီးသူများနဲ့ Online ကနေတစ်ဆင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Tip #2 သင်လိုအပ်သည့်အခါအကူအညီတောင်းပါ
တခြားသူရဲ့အကူအညီကိုမတောင်းခံလိုသူများဟာ ၎င်းအားအပျက်သဘောဖော်ပြလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် တချို့လူတွေဟာ သူတို့စိတ်အားငယ်မှုတွေ မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေအတွက် သူတို့ရဲ့ဒေါသတွေကို တခြားသူတွေအပေါ်ပုံချတတ်ကြပါတယ်။ တခြားသူတွေကို အကူအညီ‌တောင်ခံစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်ဟာလည်းတခြားသူများကို ကူညီရန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Tip #3 အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကိုရှာပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါ
လူတွေဟာသူတစ်ပါးကိုထောက်ပံ့ဖို့ဆိုရင် တွန့်ဆုတ်လေ့ရှိကြပြီး ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကင်းမဲ့သွားတဲ့အခါရန်လိုမှုများခံစားရတတ်ကြပါတယ်။ အခြားသူများကိုသင်တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြောင်းပြသခြင်း၊ အခြားသူများကိုချီးမွမ်းခြင်း၊ ကိစ္စများသေးသေးလေးတွေဖြစ်ရင်တောင် ကောင်းတဲ့အရာတွေပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကသင့်ကောင်းကျိုးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။